Blu-ray Radidiyaha: Sida loo Play ray Blu On PC?
> Resource > DVD > Sida loo Play Blu-ray On PC
Sida loo Play Blu-ray On PC
Maalmahan, ku dhawaad ​​kasta oo computer ka ciyaari kara filimada DVD (labada DVDs ganacsi ama macmal ah) ilaa iyo inta uu jiro ka dhisay-in DVD drive. Laakiin waxa ku saabsan filimada Blu-ray? Aad PC karnaa tan qaabab movie qeexitaanka sare iyada oo aan wax dhibaatooyin ah? Maqaalkani waxa uu kuu sheegi doonaa runta si aad bilaabi kartaa in aad ka qabno Blu-ray qolka aad ku nooshahay ama la saaxiibo qaba dhibaato oo kale la wadaagin.
Your computer ma waafaqsan Details ah. dhabarka ciyaaro filimada Blu-ray?
Hoos waxaa ku qoran shuruudaha nidaamka asaasiga ah inuu u ciyaaro ah disc Blu-ray on PC ah Windows-ku-saleysan. Fadlan double-hubi in aad computer buuxiyey shuruudaha ku qeexan ka hor isku dayaya isku dayayaan in ay daawato aad filimada Blu-ray.
Operating System : Microsoft Windows 7, Vista iyo XP.
Processor (processor) : Pentium 4 541 (3.2 GHz), Athlon 64 X2 3800+, AMD qeybo E-taxane, C-taxane ah ama ka sarreeya.
Graphics processor (GPU on Card) : Intel G45, ATI Radeon HD 2400, NVIDIA GeForce 7600GT ama ka sare.
Xasuusta : 2 GB looga baahan yahay Vista iyo Windows 7; 1 GB looga baahan yahay Windows XP.
Hard Disk Space : 100-500 MB ciyaaryahan Blu-ray rakibo.
Disc Player : BD-ROM / BD-RE ama Super Multi Blu disc Combo drive.
Device Display (optional) : Si aad u ciyaaro movie Blu-ray on TV, kaararka HDCP TV waafaqsaneyn iyo video waxaa looga baahan yahay. Taasi waxay ka dhigan tahay DVI, HDMI, DisplayPort ama xirayaasha kale waxaa lagu bixiyaa labada dhinac.
Cyberlink bixisaa ah taliyaha BD & 3D in uu sheego your computer si ay u arkaan haddii ay tahay socon dhabarka ciyaaro ah disc Blu-ray aad kombuutarka. Si kastaba ha ahaatee, ma ahan wax sax ah. Sidaa awgeed, waa ay fiican tahay in aad eegto ama akhri galay fursado dheeraad ah oo ay suurtagal tahay ka hor-simaha waxay dushiisii.
Waxa aad u baahan tahay?
Haddii aad kombiyuutar awood ku filan leedahay, waxaad u baahan tahay oo dhan waa ciyaaryahan Blu-ray ah! In suuqa ciyaartoyda Blu-ray '; Ultra PowerDVD ah, WinDVD iyo TotalMediaTheater ee ugu sareeya 3 ciyaartoy. Sidaa darteed, waxaa dhici karta inaad malayn karaa kharashka ka yimaada waxaa la. Si kastaba ha ahaatee, waxaa kale oo fara badan xal lacag la'aan ah halkaas. Tusaale ahaan; DAPlayer ah. Waxaad si fudud u soo bixi kartaa waa halkan .
Play Blu-ray on PC si toos ah
Wax walba oo ay meel? DVD drive iyo ciyaaryahan oo dhan diyaar u ah, si ay u tagaan dhigay? Waa wakhti ay ku tijaabiyaan! Haddii drive Blu-ray si fiican u shaqeeyo iyo disc aan la waxyeelo, ee filimada Blu-ray si dabiici ah muu ku tuso ilaa aad shaashadda. Haatan waxaad ku fadhiisan karaa oo wuxuu ku raaxaysan tayo sare leh filimada Blu-ray aad.
Play Blu-ray on PC via Virtual Drive
Ma waxaad u bixi wax kasta oo ku jira Blu-ray oo isku dayay in uu u ciyaaro aad kombuutarka? Aad ciyaaryahan ayaa keenay in la Fariintii ugu xun iyo wax aad looga xumaado baadi? Ma leh in ciyaaryahanka Blu-ray ma taageeri drive files adag loo maqli karo? Ha welwelina, waxaan sidoo kale kaa caawin kartaa on this mid ka mid ah. Mid ka mid ah xalka uu yahay in la abuuro image file ISO ah ka dibna u korto sidii drive computer isticmaalaya software ah drive dalwaddii. Wixii kiiskan, Tools Daemon Lite si weyn lagu talinayaa, waana lacag la'aan ah, laakiin kaliya in la isticmaalo guriga. Marka uu soo bixi, isku day inaad mar kale korto aad movie Blu-ray. Markan wareega, aad ciyaaryahan Blu-ray awood u yeelan doonaan in la aqoonsado drive ee dalwaddii oo loo maqli karo sida caadiga ah.
Sida loo saar Cinavia la DVDFab
Sida loo abuuro DVDs on OS X Mavericks
Sida loo sameeyo DVD Muqaal ah
Sida loo Beddelaan RMVB in DVD la RMVB in DVD Converter